အတတ်ပညာ China 1325 disc tool atc cnc router စက်ရုံနှင့် ထုတ်လုပ်သူ |JCUT
1. မြင့်မားသောထိရောက်မှု-များစွာသော spindle မော်တာများသည် တစ်ချိန်တည်းတွင် အလုပ်လုပ်နိုင်ပြီး ပမာဏများစွာဖြင့် ထုတ်ကုန်များကို အပြီးသတ်နိုင်သည်။အဆင့်မြင့် အလိုအလျောက် ကိရိယာ ပြောင်းလဲမှု ပရိုဂရမ်၊ လူကိုယ်တိုင် ဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှု မရှိဘဲ၊ ပရိုဂရမ်ကို အလိုအလျောက် လုပ်ဆောင်ပါသည်။ပြင်းထန်သော စုပ်ယူနိုင်စွမ်းရှိသော ဖုန်စုပ်စုပ်စက်၊ လေးဇုန်ဒီဇိုင်း၊ မတူညီသော ဧရိယာများ၏ ပြင်းထန်သော စုပ်ယူမှုအားကောင်းသော ဖုန်စုပ်ပန့်ကို တပ်ဆင်ထားသော နိုင်ငံတကာ ထိပ်တန်းနည်းပညာသုံး ဖုန်စုပ်စက်စားပွဲကို အသုံးပြု၍ အလုပ်ထိရောက်မှုကို များစွာတိုးတက်စေပါသည်။
2. မြန်ဆန်သော ဂီယာမြန်နှုန်း-shaft နှစ်ခုစလုံးသည် rack လည်ပတ်မှု၊ မြင့်မားသောအမြန်နှုန်း၊ မြင့်မားသောထိရောက်မှု၊ ဖြတ်သန်းမြန်နှုန်း 120000MM/MIN အထိဖြစ်သည်။
3. လျင်မြန်သောထွင်းထုမြန်နှုန်း-မြန်နှုန်းမြင့် drive stepper မော်တာနှင့် drive ကိုအသုံးပြုခြင်း၊ Y ဝင်ရိုးအသုံးပြုခြင်းနှစ်ထပ်မော်တာဒရိုက်၊ မြင့်မားသောတိကျသောဖြတ်တောက်ခြင်းဒရိုက်ဗ်၊ ထွင်းထုခြင်းအမြန်နှုန်းကိုပိုမိုမြန်ဆန်စေရန်အတွက်ခိုင်ခံ့သောဖြတ်တောက်ထားသောဗိုင်းလိပ်တံနှင့်အတူ။
4. ချောမွေ့သောလည်ပတ်မှု-တင်သွင်းလာသော linear လမ်းညွှန်ရထားလမ်း၊ နှစ်တန်းနှင့် ဘောလုံးဆလိုက်တုံး လေးတန်း၊ ကြီးမားသော bearing force၊ ချောမွေ့သောလည်ပတ်မှု၊ တိကျမှု၊ ရှည်လျားသောအသက်၊ မြင့်မားသောတိကျစွာတင်သွင်းထားသောဘောလုံးဝက်အူ၊ တိကျသောဖြတ်တောက်ခြင်း။
5. အသိဉာဏ်ထိန်းချုပ်မှု-အတိုင်းအတာ မက်ခရိုကတ်၏ ကွန်ပျူတာ ထိန်းချုပ်မှုစနစ်ကို ကျင့်သုံးခြင်း (DSP off-line handle control system သည် စိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်နိုင်သည်)၊ breakpoint၊ power off၊ cutting tool နှင့် ထွင်းခြင်း၊ မြင့်မားသော တည်ငြိမ်မှုနှင့် ထိရောက်မှုမြင့်မားပြီး သင်ယူရန် လွယ်ကူသည်။
6. မြင့်မားသောတိကျမှု-အဆင့်မြင့် ဂဏန်းသုံးလုံး မျဉ်းကွေး ခန့်မှန်းမှု အယ်လဂိုရီသမ်သည် မျဉ်းကွေး လည်ပတ်မှု အမြန်နှုန်းနှင့် တိကျမှုကို သေချာစေပြီး ပြည်တွင်းနှင့် ပြည်ပ ဆော့ဖ်ဝဲလ်များစွာ (ဥပမာ- MasterCAM၊ Type3၊ UG၊ AutoCAD၊ ArtCAM၊ Proe၊ JDpaint) စသည်တို့နှင့် ကောင်းစွာ တွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
7. ခိုင်ခံ့ပြီး တာရှည်ခံသည်-အိပ်ရာ၏ အလုံးစုံသော သံမဏိဖွဲ့စည်းပုံကို ဂဟေဆက်သည်၊ ခိုင်ခံ့သော သံမဏိ၊ ကြီးမားသော ခွန်အား၊ ချောမွေ့စွာ လည်ပတ်မှု၊ ပုံပျက်ခြင်းမရှိဘဲ မြန်နှုန်းမြင့် လည်ပတ်မှု၊ တုန်ခါမှု မရှိပေ။ Gantry လှုပ်ရှားမှု၊ စားပွဲကို ခိုင်ခံ့စေသည်၊ အလုပ်စားပွဲပေါ်ရှိ ပစ္စည်းများ၏ ထင်သလို စီမံဆောင်ရွက်နိုင်သည်၊ ခိုင်ခံ့ပြီး တာရှည်ခံပါတယ်။
သစ်သားလုပ်ငန်းတံခါးအမျိုးမျိုး၊ ပြတင်းပေါက်များ၊ ဗီဒိုများ၊ လက်မှုသစ်သားတံခါးများ၊ ဆေးသုတ်ခြင်းကင်းသောတံခါးများ၊ စခရင်များ၊ လက်မှုပန်ကာ Windows၊ လှိုင်းပြားထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့် အခြားပရိဘောဂများ၊ သစ်သားပြုပြင်ခြင်း။
ကြော်ငြာလုပ်ငန်းကြော်ငြာဆိုင်းဘုတ်များ၊ ဆိုင်းဘုတ်များထုတ်လုပ်ခြင်း၊ ကြော်ငြာပစ္စည်းဖြတ်တောက်ခြင်း၊ ပလပ်စတစ်ပုံသွင်းခြင်း၊ LED နီယွန်မီးများထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့် အခြားပစ္စည်းများ ကြော်ငြာအလှဆင်ပစ္စည်းများ။
အနုပညာနှင့်လက်မှုလုပ်ငန်းသစ်သား၊ ဝါး၊ အတုစကျင်ကျောက်၊ အော်ဂဲနစ်ဘုတ်၊ နှစ်ထပ်ရောင်ဘုတ်၊ ပုံဆောင်ခဲနှင့် ချောမောသောပုံစံများနှင့် စာသားထွင်းထုခြင်းအမျိုးမျိုးအတွက် ဖြစ်နိုင်သည်။
အသုံးပြုနိုင်သောပစ္စည်းများ အမျိုးမျိုးသောသစ်သားပစ္စည်းများ;အလူမီနီယမ်ပန်းကန်၊ လူမီနီယမ်ပလပ်စတစ်ပန်းကန်၊PVC၊ acrylic၊ နှစ်ထပ်ရောင်ဘုတ်၊ သိပ်သည်းဆဘုတ်၊ crystal board နှင့် အခြားကြော်ငြာပစ္စည်းများ၊နှင့်အတု ပျော့ပျောင်းသော စကျင်ကျောက် နှင့် အခြားသော သတ္တုမဟုတ်သော နှင့် ပေါ့ပါးသော သတ္တုပစ္စည်းများ။
အဆင့်မြင့် R7 ATC CNC ဖြတ်တောက်ခြင်းစက်
Tool မဂ္ဂဇင်း ကိရိယာအာရုံခံကိရိယာပါသော ဆာဗာဒစ် အော်တိုတူးလ်ပြောင်းလဲသူ မဂ္ဂဇင်း 12 ခု
မော်တော် ဂျပန် Yaskawa 850w ဆာဗာမော်တာ
ဒရိုက်ဘာ ဂျပန် Yaskawa 850w ဆာဗိုဒရိုက်ဘာ
ထိန်းချုပ်မှုစနစ် Syntec 6MB ထိန်းချုပ်မှုစနစ်
လျှော့စားပါ။ ဂျပန် Shimipo လျော့ပါး
အသားတင်အလေးချိန် 2700 ကီလိုဂရမ်
ယခင်- Atc ပရိဘောဂစက်
နောက်တစ်ခု: spindle row တူးဖော်စက် cnc router နှစ်ခု
China Atc Cnc Router Spindle စက်ရုံများ
လက်ကား Disc အမျိုးအစား Atc Cnc Router Quotes